I-beta ye-Chrome 94 ifakiwe ngezithuthukisi ze-media API nokuningi | Kusuka kuLinux
I-beta ye-Chrome 94 ifakiwe ngezithuthukisi ze-media API nokuningi
Zimbalwa izinsuku ezedlule I-Google imemezele ukutholakala kwenguqulo ye-beta ye-Chrome 94. Le nguqulo entsha ingeza imisebenzi emisha esipheqululini futhi iletha nokuthuthuka okuthile, phakathi kwayo ukuqedwa kweWebCodecs API kumakiwe njengengxenye yesivivinyo saso sokuqala ngakho-ke isiyatholakala ngokusemthethweni.
I-WebGPU ingena esigabeni sokuqala sokuhlola se-Chrome 94. I-WebGPU iyingxenye yenguqulo ye-beta ye-Chrome 94 nabathuthukisi be-Chrome Bahlose ukufinyelela kubo bonke abasebenzisi kunguqulo ezinzile ye-Chrome 99.
Ama-API wemidiya akhona asezingeni eliphakeme futhi agxile kakhulu, ngakho-ke i-codec API esezingeni eliphansi izosekela kangcono izinhlelo zokusebenza ezivelayo, njengokusakazwa komdlalo okubambezela ukubambezeleka, imiphumela eseceleni yamakhasimende, noma ukubhala ikhodi, nokusekelwa kweziqukathi zemidiya.
La I-WebCodecs API gcwalisa lezi zikhala nge nikeza indlela yokusebenzisa izinto ze-multimedia esevele zikhona kusiphequluli.
Ngenkathi i I-WebGPU API owalandela ama-WebIs we-WebGL naweWebGL2 we-Web kanye ne inikeza izinto zesimanje ezifana ne- "GPU computing"kanye nokufinyelela okungambi eqolo kwehadiwe ye-GPU nokusebenza okungcono, okungaqagelwa kalula.
Lokhu ngukuthuthuka ngaphezu kokuhlangana kwe-WebGL okukhona, ezazenzelwe ukudweba izithombe, kodwa zazingashintshwa kuphela kwezinye izinhlobo zezibalo ngomzamo omkhulu. I-WebGPU iveza amakhono emidwebo yesimanje, kufaka phakathi i-Direct3D 12, i-Metal, ne-Vulkan, ukwenza umsebenzi we-GPU. Lesi sici savivinywa ekuqaleni ku-Chrome 94, ngethemba lokuthi sizothunyelwa ku-Chrome 99.
Ngokuya nge-Google, kunzima ukudala izinhlelo zokusebenza zewebhu eziphendula ukuxhumana komsebenzisi futhi uhlale uphendula ngokuhamba kwesikhathi. Imibhalo ingenye yezimbangela ezinkulu ukulahlekelwa ukuphendula.
“Thatha isibonelo se-» find njengoba uthayipha i- «function: uhlelo lokusebenza olunalo msebenzi kufanele lulandele okokufaka komsebenzisi njengoba kubuyisa futhi kukhombisa imiphumela. Akubheki noma yini eyenzeka ekhasini, njengopopayi, okumele icutshungulwe ngaphandle kwezinkinga, ”kusho le nkampani.
Ngokungeziwe ezintweni ezingenhla, le nguqulo ye-Chrome wethula ikhodi entsha yesimo se-HTTP: 103 Amathiphu okuqala ukulayisha kuqala izinsizakusebenza kuqala. Lapho impendulo eyi-103 ifaka phakathi noma ezinye izihloko zokuxhumanisa, i-Chromium izama ukulayisha kabusha (kanye / noma ukuxhuma ngaphambili, ukulayisha kuqala) izinsiza ezichaziwe ngaphambi kokuthola impendulo yokugcina. Ngokuya nge-Google, lokhu kunikeza abathuthukisi bewebhu indlela yokusebenzisa izinsiza, amasayithi, namakhasi.
Enye into entsha ukuxhumana kwe I-VirtualKeyboard enezindlela nezakhiwo zokulawula ukubonisa noma ukufihla ikhibhodi ebonakalayo. Iphinde idale imicimbi enosayizi wekhibhodi ebonakalayo lapho okuqukethwe kwekhasi kumnyama. Ikhibhodi ebonakalayo ikhibhodi ekusikrini esetshenziselwa ukufaka kuzimo lapho ikhibhodi yehadiwe ingahle ingatholakali khona.
Ngokungafani nekhibhodi yezingxenyekazi zekhompuyutha, ikhibhodi ebonakalayo ingaguqula ukwakheka kwayo ukuze ikwenze kangcono ngokuvumelana nokufakwayo okulindelekile. Onjiniyela banamandla phezu kwefomu eliboniswayo lekhibhodi ebonakalayo ngemfanelo yemodi yokufaka, kodwa banokulawula okulinganiselwe lapho ikhibhodi ebonakalayo ikhonjiswa noma ifihliwe.
Tambien Izinsizakusebenza ezingaphansi kwesisetshenziswa ezivela kunethiwekhi yangasese zikhawulelwe ukuvikela okuqukethwe. Ukufinyelela kwenethiwekhi yangasese kunikeza isethi yezinguquko ezihloselwe ukunciphisa umthelela wezicelo ezenziwe kulawa maseva, ukuqinisekisa ukuthi amaseva amukela noma yikuphi ukuxhumana nezinhlangano zangaphandle. Ukuze lokhu kubamba iqhaza kube nenjongo, amaseva kufanele akwazi ukuqinisekisa ukuthi imvelaphi yeklayenti iqinisekisiwe. Ngale njongo, okuqukethwe okuphephile kuphela okugunyaziwe ukwenza izicelo zangaphandle.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-beta ye-Chrome 94 ifakiwe ngezithuthukisi ze-media API nokuningi
IGab: I-Open Source Social Networking Software esekwe eMastodon
ILibreOffice 7.2 ifika ne-GTK4, WebAssembly, izinguquko nokuningi